Filimka F.A.L.T.U oo kulmiyay 30 Jilaa - iftineducation.com
Akshay iyo kereena
iftineducation.com – Filimka laga magac baxay Faltu ayaa waxa uu noqon donaa mid ay ku kulmaan in ka badan 30 jilaa oo ka mid ah Bollywoodka.
Filimkan ayaa duubistiisa la bilaawi donaa todobaadyada soo socda waxaana jilaaga koowaad ka ah xiddiga Bollywoodka ee Akshay kumar iyadoo filimka uu ka dhex muuqan doono rugcadaaga Bollwyoodka Amitabh Bachchan (Cali dheere)iyo wiilkiisa Abhishek Bachchan sidoo kale waxaa la huba ilaa hada inay ku jiri donana filimkan xidigaha kala ah Salman Khan,Kareena Kapoor,Ritesh Deshmukh Sunil Shetty, Saif ali Khan, Sohail khan iyo qaar badan.
Filimka Faltu ayaa sheekada uu xanbaarsanyahay waxa eey tahay mid ku saabsan qiso jaceyl waxaana soo saare ka ah, Director lagu magacaabo Remo kaasi oo ah mid aan waligiis horay u sameyn wax filim ah su’aasha dad badani is weydiinayaan aya waxa ay tahay soo saare aan waligi filim so sarin sida uu u kulmiyay jilayashaan magaca weyn ku leh caalamka Bollywoodka. Waxaana sidoo kale la jili doona filimkan Akshay Kumar laba gabar ee kala ah Puja Gupta oo ah gabar kalinta 7aad ka gashay quruxda dunida sanadkii 2007 iyo gabarta kale Pooja Chopra oo iyaduna quruxda aduunka ka gashay kalinta 7aad sanadkii tagay 2009 waxa ay ka qeyb gashay filimkii Fashion ee 2008 waxa uu ahaan doonaa Akshay Kumar mid u dhaxeeyo laba gabar ee Pooja Chopra iyo Puja Gupta.
Saif Ali Khan, Akshey iyo Kareena.
Akshay Kumar, Kareena Kapoor iyo Saif Ali khan oo Faltu ku wada jira Jacky Bhagnani oo ka mid ah jilayaasha iyo soosarayaasha filimka ayaa waxa uu sheegay inuusan aheyn filimka Faltu street dancer (Qoob ka ciyaar jidka lagu dheelo).
Akshay kumar ayaa ah mid diyaar ugu jiro filimo badan isagoo mar kale dib ula jili doono saaxiibkiis John abraham filim dagaal ah.
Wargesyada qaarkood ayaa shegayo inee filimkan ku jiraan Shahruk khan iyo Hirithik Roshen mase caddo arintaasi, hadaba aqristow mar walba kala soco waxii ku so kordha bollywoodka.